SADC Tribunal Yodzinga Hurumende Kubva Papurazi Yarakabvuta
Dare reSADC Tribunal rakadzika neChina mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kubva papurazi remurimi muchena, Va Mike Campbell, uye hurumende yaVaMugabe haifaniri kukanganisa VaCampbell pazvirongwa zvavo zvekurima papurazi ravo. Va Campbell ndemumwe wevarimi vechichena vane mapurazi ari kuda kutorwa nehurumende pasi pechirogwa chayo chekugova patsva ivhu.
Richipa mutongo waro kuNamibia, muWindoek, dare iri rakati hurumende inofanirwa kubvumidza VaCampbell, mhuri yavo pamwe nevashandi vavo kuramba vachirima papurazi ravo, uye havafanirwi kubviswa panzvimbo yavo iyi kusvikira dare iri rapedza kuzeya nyaya yavo zvizere. SADC Tribunal yakaumbwa negore ra2000 nechinangwa chekugadzirisa nyaya dzinenge dzichinetsa musangano reSADC uye nyaya yaVaCampbell iyi ndeyekutanga kuzeyewa nedare iri.
Kuti tinzve kuti mutongo uyu unorevei, Ntungamili Nkomo weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu VaGabriel Shumba avo vanoti semaonero avo, hurumende yaVaMugabe inogona kusatevedzera mutongo uyu.